ल्यापटपमा ब्याट्रीको आयु कसरी बढाउने ? कम्प्युटर इन्जिनियरको टिप्स | Ratopati
ल्यापटपमा ब्याट्रीको आयु कसरी बढाउने ? कम्प्युटर इन्जिनियरको टिप्स
personरातोपाटी exploreकाठमाडौं access_timeअसार १४, २०७८ chat_bubble_outline0
ल्यापटपको ब्याट्री ब्याकअप उक्त ब्याट्रीको लाइफसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । साधारणतया ल्यापटपको ब्याट्री तीन–चार वर्षमा फेर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, केही निश्चित तरिका अपनाउने हो भने ब्याट्रीको आयु बढाउन सकिन्छ । ब्याट्रीको आयुलाई साइकलमा नापिन्छ । साइकल भनेको कतिपटक पूर्ण रुपमा चार्ज गरियो र कतिपटक पूर्ण रुपमा चार्ज सिध्याइयो भन्ने चक्र हो ।
तरपनि यी केहि कुरामा ध्यान दिन सकियो भने अझै केहि लामो समयसम्म ब्याट्रीको आयु बढाउन सकिन्छ ।
स्क्रिनको ब्राइटनेस डिम गर्ने
ल्याप्टप को ब्याट्री डिस्प्लेको धेरै उज्यालोले गर्दा पनि चाँढै सकिने हुन्छ , यहि डिस्प्लेको चम्किलोपनलाई कम गरेर पनि ब्याट्रीलाई केहि हदसम्म टिकाउन सकिन्छ ।
एकैपटक धेरै प्रोग्राम नखोल्ने
ल्यापटपमा काम गर्दै हुनु हुन्छ भने एक पटकमा एउटै मात्र काम गर्नुहोस् । एक पटकमा धेरै प्रोग्रामहरु चलाउनाले ब्याट्री धेरै खपत हुन्छ ।
ड्राइभको कम प्रयोग गर्ने
ल्यापटपमा एक्सटर्नल ड्राइभ जस्तै पेन ड्राइभ, हार्ड डिस्क, सिडि, डिभिडी, कार्ड रिडर आदिलाई काम सकिने बित्तिकै निकाल्नुपर्छ । लगातार यस्ता एक्सटर्नल ड्राइभ ल्यापटपमा जोडी राखेको खण्डमा छिटो ब्याट्री सकिने हुन्छ ।
ल्यापटपलाई हाइबर्नेट मोडमा प्रयोग गर्ने
यदि तपाईले ब्याट्रीको टिकाउको निम्ती ल्यापटपलाई स्ट्यान्डबाई मोडमा राख्नुभएको छ भने यसलाई हाइबर्नेट मुडमा राख्ने गर्नुहोस् । हाइबर्नेट मोडमा स्ट्यान्डबाई मोडमा भन्दा धेरै पावर बचत हुन्छ ।
ब्याकलिट किबोर्ड अनावश्यक प्रयोग नगर्ने
खास गरेर किबोर्डमा ब्याकलिट गुण भएका ल्यापटपहरूमा ब्याकलिट अन गरेर चलाउँदा धेरै ब्याट्री प्रयोग हुने भएकाले अत्यावश्यक समयमा मात्र अन गरेर चलाउने गर्नु पर्दछ ।
यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्ः
यदि तपाई इन्टरनेटमा काम गरिराख्नु भएको छ र ल्यापटपको प्रयोग गर्नु भएको छ भने, कुनै कुरा पनि बन्द नगर्नुहोस यसो गर्नु भयो भने तपाइको काम हराउन सक्छ ।
आफु वर पर नभएको बेलामा ल्यापटप चार्ज गरेर नछोड्नुहोस् ।
यदि तपाई लामो समयसम्म ल्यापटप प्रयोग गरि राख्नु हुन्छ भने तपाईको ल्यापटप छिटो तात्ने र छिटै ब्याट्री सकिने समस्या देखिन सक्छ ।
( कम्प्युटर इन्जिनियर​)